20/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Nanamarika ny androm-pifidianana omaly ny nahitana ireo fikasana hangala-bato tamin’ny toerana maromaro teto Madagasikara. Io moa le efa notenen’ingahy Rajoelina hoe « Tsy maintsy lany », dia nataony ny fomba rehetra tsy maintsy ahalany azy, ary ao anatin’izany ny hala-bato. Na dia efa hita taratra aza ny fiandohan’ny halatra saika natao, dia mahagaga fa izy « mamo indray no miantso polisy », sy manetsi-keloka etsy sy eroa. Efa fantatra ny tsy fahatokisan-tenan’ny kandidà faha-13, ka nahatonga azy sy ny ekipany niketrika hala-bato. Soa fa efa nitranga mialohan’ny paikady saika entin’izy ireo, ary tao anatin’izany ny baiko nomen’ny minisiteran’ny Atitany ireo olona teo ambany fiadidiany, izay novakian’ireo ben’ny tanàna bantsilana. Efa hita taratra ihany koa ny fikasana hanohy izany hala-bato izany, ka tao anatin’izany ny fampiasana ilay bileta tokana. Tao anatin’izany paikady izany ny tsy nisian’ny bileta tokana nisy naka tao amin’ny boriborintany faharoa. Ankoatra izay, tsy ny kandida 25 mihitsy no hanana tombontsoa amin’ny fampiasana bileta efa nasiana marika teo amin’ny 13, toa ny hita tany Ankilizato. Iza izany no miketrika hala-bato ? Ny tratra sy ny hitan’ny maso ary niampy ny fahatongavan-tsainan’ny olona sasany ireo fa nety mbola nisy ny tany ambadika tany.
Hita taratra tamin’ireo vokatra sasany efa voaray, fa maro tamin’ireo birao fandatsaham-bato no narisika tamin’ny fiarovana ny safidin’ny vahoaka.
Ny Mahagaga, dia ny mpaniraka sy ny tompo-marika indray no mitatatata etsy sy eroa, fa misy olona toa izao sy toa izao manao hala-bato tary, ary tsy mahamenatra azy ireo ihany koa ny manilika izany amin’ny mpifaninana… moa va tsy manetsi-keloka ?
Efa andro vitsivitsy no namaky bantsilana ny fisian’ny kara-pifidianana sy karapanondro sandoka ny kandidà Ravalomanana, ary maromaro ireo tratra omaly, tamin’ny fampiasana izany kara-pifidianana na karapanondro sandoka izany. Izay ilay hoe « Tsy maintsy lany» nasesin’ingahy Andry Rajoelina izany? Nampiasaina avokoa izao hevitra rehetra ahazoana fandresena izao, ka tonga hatramin’ny hala-bato avo lenta. Niezaka niaro ny safidiny ny Malagasy.
« Fanambintsika ny hitondra fampandrosoana eto amin’ny firenena. Efa nosokafantsika rahateo ny varavaran’ny fampandrosoana tamin’ny alalan’ireo asa vita », hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Nambarany mantsy fa mila mijoro ny rehetra ary mila mifanome tanana ...Tohiny